WAX KA BARO QAAR KA MID AH HABLAHA AY MADAXDA CAALAMKU DHALEEN EE DALALKOODA AWOODDO DHEERAAD KA AH KU LEH!! | Raadgoob
WAX KA BARO QAAR KA MID AH HABLAHA AY MADAXDA CAALAMKU DHALEEN EE DALALKOODA AWOODDO DHEERAAD KA AH KU LEH!!
3. Katerina Tikhonova (Inanta Uu Dhalay Madaxweyne Putin)
Madaxweynaha Waddanka Ruushka Vladimir Putin oo dhawaan mar kale loo doortay in uu muddo lix sanadood ah xilka Madaximo ee dalkisa sii wato wuxuu si adag u difaacay noloshiisa gaarkaa ah. Waxaana in badan saxaafaddu wax ka qoraan laba hablood oo uu dhalay Vladimir Putin awoodda ay ku leeyihiin dalkaasi iyaga oo ka mid ah dadka ugu caansan ee warbaahintu mar walba daba gasho ee wax ka qoraan. Saraakiisha Ruushku waxay ka shakiyaan warbaahin kasta oo daneyneysa arrimaha qoyska Putin sidaa darteed way adag tahay in macluumaad sax ah oo sugan laga helo arrimaha qoyska Putin gaar ahaan inantiisa weyn ee lagu magacaabo Tikhanova sidaa waxa yidhi weriyaha BBC-da ee Ruushka Famil Ismailov oo warbixin ka diyaariyey gabdhaha Madaxweyne Putin iyo saamaynta ay leeyihiin.
Sanadkii 2015-kii, gabadhiisa yar ee lagu magacaabo Yekaterina, waxay masrax ka soo muuqatay ka dibna waxaa qabatay isha dad badan. Waxaa la soo bandhigay in ay ku nooleyd Moscow iyadoo adeegsaneysa magaca ah Katerina Tikhonova.
Markaasi ka dib waxay warbaahinta qaar soo bandhigeen in uu gabadhaasi guursaday nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Kirill Shamalov, oo uu dhalay mid ka mid ah saaxiibada Putin. Lamaanahaas waxaa dhaqaalohooda lagu qiyaasay $2bn oo dollar, ayna ka shaqeeyaan maal-gashiga shidaalka iyo warshadaha. Iyada oo warbaahintu sheegto in gabadhan uu Putin dhalay ay tahay mid aqoon ahaan dhisan aadna u maskax badan sidaa darteed ku guulaysatay in ay dhaqaale badan shaqaysato iyada oo aanay wax badan warbaahintu ka ogayn. Waxaana u suurto gashay in iyada iyo ninkeedu ay ka mid noqdaan maalqabeenada Ruushka ah. Hadda waxay jirtaa 30 sano, waxayna hormuud ka tahay mashruuc si shaac ah loo maalgeliyo oo lagu magacaabo “Horumarinta Garaadka”.
Mashruucaasi waxay ka fulineysaa jaamacadda Moscow oo ay maamusho dowladdu. Waxaa la sheegaa in ay kor kala socoto qandaraasyo Malaayiin dollar lagu bixinayo, waxaana lataliyayaal u ah dadka saaxiibada dhow la ah aabeheed. Tikhonova waxay sidoo kale aad ugu wanaagsan tahay ciyaaraha qoob ka ciyaarka, waxayna lambarka shanaad ka gashay tartankii 2013kii lagu qabtay Switzerland iyada oo ah gabadh aad ugu caan ah ciyaartaasi qoob ka ciyaarka ee barafka lagu dul ciyaaro waana gabadh ciyaaraha aad u jecel. Ka sokow arrimaha ciyaaraha iyo dhaqaalaha ee ay ku jirto waxa ay sidoo kale saamayn weyn ku leedahay awoodda aabaheed oo ay ka faa’iidaysato waxaana laga yaabaa in ay dhinaca siyaasadda wax badan uga qabsoomaan marka ay gaadho da’ intan ka weyn maadaama ay wali tahay mid ku mashquulsan dhaqaale urursi.
Katerina Tikhonova waxa ay khudbado ka jeedisaa machadyo iyo jaamacado waaweyn oo adduunak ku yaalla gaar ahaan dalka Ruushka waxaanay in badan ka hadashaa sidii habluhu u shaqaysan lahaayeen oo ay wax u qabsan lahaayeen ulana tartami lahaayeen ragga dhiggooda ah sidaa darteed waxa ay inta badan ka hadashaa arrimaha horumarinta nafta, dhaqaale abuurka iyo kobcinta fikradaha wax ku oolka ah ee waxtarka leh. Waxa ay saamayn weyn ku leedahay dhallinyaro badan oo ku xidhan aadna u taageera dhiirri galinteeda.